कुहिरो भित्र कोरिखा गाऊँ
-सुरेन्द्र राना कोरिखा, तनहुँ, भदौ २०
पुराना शैलीको माटाका घर, ढुंगाको छानो, हरियाली डाँडा, बारीमा लटरम्मै फलेका तरकारी र फलफूल समुन्द्र सतहबाट ९६० मि. उचाईमा रहेको कुहिरोसँग लुकामारी खेल्ने सुन्दर बस्ती हो गुरूङ जातीको सुन्दर गाउँ कोरिखा।
दुई महिनाअघि मात्र पत्रकार अमृत भादगाउँले र पोखरा भिटोफको निवर्तमान अध्यक्ष तारानाथ पहारी होमस्टेको सम्भावना अध्ययन गर्न यहाँ आएका थिए।
गाउँ पर्यटन प्रवर्द्वन मञ्च नेपाल (भिटोफ) केन्द्र काठमाडौंका कोषाध्यक्ष गगन राज न्यौपाने नेतृत्वको टोली शुक्रबार त्यहाँ पुगेर अवलोकन र परिचयात्मक भ्रमण गरेको छ।
भ्रमण टोलीमा भिटोफ नेपालका पूर्वकार्यसमितिका पधाधिकारीहरु, पत्रकार, पर्यटन व्यवसायीहरु र पर्यटन प्राध्यापकको सहभागिता थियो।
टोली कोरिखा गाउँ पुग्दा साँझ परिसकेको थियो, सिम सिम पानी पनि! गाउँ कुहिरोसँग लुकामारी खेलिरहेको गाउँ अध्यारोमा पनि उज्येल्लिएको थियो।
सूर्यदय युवा क्लवका हँसिला बहिनीहरूले पाहुनालाई फूलमालाले स्वागत गरे।
बिहान छलफल कार्यक्रममा कोरिखा सामुदायिक होमस्टेका सचिव लिलबहादुर गुरुङले होमस्टेकोबारेमा परिचय गराए। उनले स्थानीय जीवनशैली, परिकार र शान्त वातावरण भएकोले कोरिखा गाउँ चिनाउन होमस्टे सञ्चालनमा ल्याएको बताए।
गाउँका मानिसहरु शहरतिर बसाई सर्ने क्रम बढेकोले होमस्टेबाट पर्यटकहरुको चहलपहलले गाउँ फर्किने आशासमेत उनले राखे।
‘गाउँ पर्यटन प्रवर्द्वन मञ्चको मुख्य उद्धेश्य ग्रामीण क्षेत्रको पर्यटकीय सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, प्रचार प्रसार गर्ने तथा पूर्वाधार विकासमा सहयोग पर्‍याउनु हो,’ भिटोफका सह-कोषाध्यक्ष कृष्णबहादुर सुवेदीले भने।
उनले कोरिखा गाउँ एक राम्रो घरबास गन्तव्य बन्न सक्ने गाउँ भएकाले आगामी दिनमा मञ्चले आवश्यक सहयोग गर्ने बताए।
भिटोफ नेपालका पूर्व महासचिव तथा नेपाल मगर पर्यटन समाजका उपाध्यक्ष राजकुमार थापाले गाउँको राम्रो आतिथ्य सत्कार, मिठो खानपिन र राम्रो सुत्ने प्रबन्धले सबैलाई मोहित बनाउने दाबी गरे।
उनले घरबास चलाउने, विधि र अन्य उपयोगी जानकारीसमेत गाउँलेलाई बताएका थिए।
होमस्टेको आवस्यक तालिमका लागि पोखरा भिटोफसँग सहकार्य गर्न पनि उनले सुझाउँदै आफ्नो तवरबाट गाउँको प्रचार प्रसारमा सकेको सहयोग गर्ने बचन दिए।
कार्यक्रममा भिटोफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष चित्र बहादुर गुरूङले गाउँ पर्यटन प्रवर्द्धन मञ्च नेपाल पोखराद्वारा प्रकाशित ‘होम्सटे दर्पण २०७४’ पुस्तिका कोरिखा सामुदायिक होमस्टेका अध्यक्ष साबित्री गुरुङलाई हस्तान्तरण गरे।
त्यसैगरी थापाले १० सेट बेडसिट र सिरानीको खोल सहयोग स्वरुप भ्रमण टोलीको तर्फबाट प्रदान गरे। देउराली आमा समूहले आगन्तुकको खानपिन तथा बासको ब्यवस्थापन गरेको थियो। सूर्यदय युवा क्लबका भाईबहिनिहरुले सांस्कृतिक नाँचगान (चुड्का नाँच) प्रस्तुत गरेको थियो।
पर्यटकीय ठाउँ बन्दिपुरदेखि ४ कि.मि पूर्व, जिपमा करिब २० मिनेट र हिँडेर एक घण्टा लाग्छ ।
पृथ्बी राजमार्गको आँधिखोला र गोरेचौताराबाट दक्षिण उकालो एक घण्टा हिडेमा पनि पुगिन्छ।
कुल ३२ घरधुरी रहेको गाउँमा अहिले पाँचवटा घरमा होमस्टे सुविधा छ।
के के पाइन्छ?
गुरूङ संस्कृति-चुड्का, झ्याउरे, घाटु नाँचहरू, पुराना शैलीका घर अवलोकन, अर्गानिक स्थानीय परिकार, सूर्योदय र उत्तरमा अन्नपूर्ण हिमालका श्रृंखलाहरु, मनास्लु, माछापु्च्छ्रे, हिमालचुली लगायतका सेताम्मे हिमालहरुको दृश्य देख्न पाईन्छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ २०, २०७४, ०६:३६:३८